नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : रुँदै रुँदै पढ्नु परेको एउटा चिठ्ठी: सन्तानले लत्याएर सडकमा पुगेकी आमाको मनछुने चिठ्ठी !
रुँदै रुँदै पढ्नु परेको एउटा चिठ्ठी: सन्तानले लत्याएर सडकमा पुगेकी आमाको मनछुने चिठ्ठी !
"म सायद धेरै बाँच्दिन होला छोरा, तिमीलाई थाहा छैन होला भोको पेटमा बोरा ओढेर सड़कसंग सुत्नुको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर"
"पोहोरको वैशाखमा आमाको मुख हेर्ने दिन थियो, सबैका छोरा-छोरी आए, तर तिमी आएनौ । छोरा ठिक गर्यौ, जाबो एक दिन भेटेर अनि मिठो खुवाएर के हुन्थ्यो र ? जाबो एकसरो लुगा दिएर अनि एकपटक आमा भनेर के हुन्थ्यो र कमसेकम देखावटी स्वाङ त पारेनौ !"
मेरो मुटुको टुक्रा,
यो व्यस्त सडकको छेउबाट तिमीलाई निरन्तर पुकारिरहेकी छु । सायद पुकार्दा-पुकार्दै अन्तिम स्वास फेर्छु होला । तिमीलाई त थाहा छ/छैन, पोहोर सालको चैतमा तिमीले मलाई वृद्धाश्रममा छाडेर गएको ठ्याक्कै तेह्र महिना पुगेछ । यो तेह्र महिनामा म तेह्र हजार पटक मरेँ हुँला, तिम्रो मायालु अनुहार हेर्न नपाएर अनि तिमीलाई मेरो
नजरको वरिपरि देख्न नपाएर ।
मेरो प्यारो छोरा,
सन्तानको माया कस्तो हुन्छ भन्ने त यतिबेलासम्म तिमीले थाहा पाईसक्यौ होला नि है ! तिमीले मलाई वृद्धाश्रम लग्ने बेला बुहारी दुई जीउकी थिईन् । आफ्नो मुटुको टुक्रा आफूदेखि अलग हुँदा कति पीडा हुन्छ, त्यो कुरा तिमीले बुझिसक्यौ होला । म पनि तिम्रै यादले गर्दा आजसम्म बाँचेकी छु । एकमुठी स्वास फ़ेर्न सकेकी छु । मलाई आशा छ, म मर्ने बेलासम्म तिम्रो अनुहार हेर्न पाउनेछु ।
तिमीले मलाई छाडेको वृद्धाश्रममा म अटाइन छोरा । किनकी म भन्दा धेरै दु:खी आमाहरु थिए त्यहाँ । जसको यस संसारमा कोही थिएनन् । मेरो त तिमी छौ, बुहारी छिन् र नाती पनि छ रे भन्ने सुनेकी छु । त्यसैले म आफैँ त्यो तिमीले छाडेको बृद्धाश्रम छाडेर बाहिर सड़क पेटीमा आएँ छोरा ।
सड़कको जीवन त मलाई त्यति कठोर भएन, जति तिम्रो यादले पीडा भो । तिमी मेरो पेटमा हुँदादेखि मलाई यहाँ छोड्नेबेलासम्म मैले तिमीसँग बिताएका पलहरु ओढेरै बाँचे, तिम्रा मायाहरु खाएरै बाँचे । कहिलेकाहीँ कुनै पवित्र मनले केही खानेकुरा दिँदा पनि मलाई कतै तिमी भोकै पो छौ कि भन्ने पीडा हुन्छ छोरा । आमाको मन कस्तो हुन्छ, एकपटक बुहारीसंग सोध ल, ‘भर्खरै जन्मेको बाबुको तिमीलाई माया कति लाग्छ भनेर ?’
तिमीले बुहारीको लहलहैमा लागेर मलाई त्याग्यौ, यसमा मलाई केहि दु:ख लागेको छैन । मेरोलागि त तिमीभन्दा अमूल्य सम्पत्ति अरु के नै थियो र ? एक वचन ‘जा’ भनेको भए मेरो जीवन नै तिम्रो नाममा त्यागिदिन्थेँ । किनकि तिम्रो बाबा स्वर्गे भएपछि यो संसारमा तिमीमात्र त छौ मेरो भन्ने । आफूले माया गर्ने मान्छेले दिएका पीडा पनि कति मिठो लाग्दो रहेछ । उपहास पनि सुमधुर हुँदो रहेछ । म सबै यातना चुपचाप सहन तयारै थिएँ । मैले राम्रो लुगा र मिठो खाना पनि त मागेकी थिईन । तर मलाई घरबाट निकाल्ने फ़ैसला गरेछौ । तिम्रो एउटा तस्बिरसम्म भएको भए त्यही हेरेर चित्त बुझाउँथे होला, त्यहि पनि बुहारीले निकालिदिईछिन् । अब त तिमीलाई थाहा भईसक्यो होला आफ्नो सन्तानले गरेको हरेक कुरा सह्य हुन्छ आमा-बाबुलाई होइन र ?
मलाई माफ़ गर बाबु,
म धेरैपल्ट मरेर पनि बाँचें । किनकि मलाई भोक लाग्दा तिमी भोकाएको देख्छु । प्यास लाग्दा तिमी तिर्खायौ कि भनेर झस्किन्छु । म पीडाले कराउन सक्दिन छोरा । किनकी म कराउँदा पनि तिमीलाई दुख्छजस्तो लाग्छ । हो छोरा, यो आमाको मन अचम्मको हुने रहेछ ।
पोहोरको वैशाखमा आमाको मुख हेर्ने दिन थियो, सबैका छोरा-छोरी आए, तर तिमी आएनौ । छोरा ठिक गर्यौ, जाबो एक दिन भेटेर अनि मिठो खुवाएर के हुन्थ्यो र ? जाबो एकसरो लुगा दिएर अनि एकपटक आमा भनेर के हुन्थ्यो र कमसेकम देखावटी स्वाङ त पारेनौ !
यो स्वार्थी संसारमा तिमीमात्र होइन, धेरै यस्ता छोराछोरी छन रे अचेल । त्यसैले सूर्ता नमान्नू है, बरु आफ्नो ख़्याल राख्नु । तिमीले कहिल्यै समयमा खाना खाँदैनथ्यौ । मैले हरेकचोटी मुटु धड्किदा तिमीलाईबाहेक अरुलाई सम्झिन्न । मेरो यो संसारमा अरु को नै छ र छोरा ? तिमीलाई पक्कै दिनभरि बाडुली लाग्दा कति गाह्रो हुँदो हो है, के गर्नु छोरा मेरो यति अधिकार त नखोस न है ।
म सायद धेरै बाँच्दिन होला छोरा, तिमीलाई थाहा छैन होला भोको पेटमा बोरा ओढेर सड़कसंग सुत्नुको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर । हिजो हाम्रो फुसे घरको छानु पुसे झरीमा चुहिँदा मेरो छाती ओढाएरै तिमीलाई बचाएको कुरा तिमीलाई थाहा छैन छोरा ।
अब त नाती पनि बाबा-मम्मी भन्ने भयो होला । तिमीहरुले ठिक गर्‍यौ मलाई घरबाट निकालेर । नत्र नातीले भोलि जान्ने भएपछि बुहारीले मलाई गरेको माया देखेर त्यहि सिको गर्ने थियो, अनि तिमीहरुलाई भोलि बुढेसकालमा मैलेजस्तै सडकको या वृद्धाश्रमको बास बस्नुपर्ने हुन के बेर ! आफ्नै सन्तान सडकमा भीख मागेको म हेर्न सक्दिन छोरा । म आफू जस्तोसुकै पीडा खप्न तयार छु, तर तिमीलाई सडकमा बोराभित्रको जिन्दगी बाँचेको हेर्न त के कल्पनासम्म गर्न सक्दिन । बुहारीको मन पनि नदुखाउनु है छोरा । उनी पनि कसैकी छोरी हुन्, मैले तिमीलाई जन्माउँदाजस्तै पीडा सहेर जन्माए-हुर्काएकी । हेरन, आफ्ना सबै आफन्त छाडेर सर्वस्व तिमीलाई नै सुम्पेकी छिन् ।
बाटो पारी तिमीजस्तै अनुहार देखिरहेकी छु, तिम्रो आगमन महशुस गरिरहेकी छु छोरा । आमा हुँ नि म । मलाई थाहा छ, तिमी दुनियाँको लाजले होइन, मेरै मायाले डोहोर्‍याएर आउँदैछौ । तर मेरो एक मुठी प्राण जानै लाग्यो छोरा । कहीँ कतै मलाई मरेकै देख्यौ भने पनि आँसु नझार्नु है, म मेरो आफ्नै मुटुको टुक्रा रोएको देख्न सक्दिन । बस् मलाई एकपटक आमा ssss मात्र भन्नु, मेरो आत्मले शान्ति पाउनेछ । अर्को जुनीमा भेट्ने आशामा मृत्यु कुरिरहेकी छु ….।
उही तिमीलाई माया गर्ने आमा !
नोट: सन्तानले लत्याएपछि सडकपेटीमा पुगेका हजारौं आमाहरुको मनको पीडालाई समेटेर सरगम भट्टराईले लेखेको पत्र ।
यो मनोपत्र मैले गतबर्ष काठमांडौमा बस्दा पशुपति नजिक भेटेकी एउटी आमाको सत्यकथालाई आँधार मानेर लेखेको हूँ । त्यसबेला आमाको मुख हेर्ने दिन टरिसकेकोले सम्पादित गरेर आमाको मुख हेर्ने दिनको अवसरमा प्रकाशित गर्न चाहेको थिएँ , आशा छ यसले हामी सबैको जीवनमा एउटा सकारात्मक संचार ल्याउने छ । - सरगम भट्टराई